Gịnị kpatara nlaazu? | Martech Zone
Fọdụ ndị mmadụ kwenyere na nrụrụ aka na ụlọ ọrụ, anyaukwu, akụ na ụba ụwa, agha, iyi ọha egwu na / ma ọ bụ enweghị ọrụ gọọmentị edugawo na nlaazu ụwa nke anyị na-enwe Enwere ike. Ekwenyere m na ihe ndị a niile nwere ike ịbụ ihe mgbaàmà… ma ọ bụ ikekwe kwụ n'ahịrị ndị ụfọdụ n'ime ndị azụmaahịa kacha ukwuu n'ụwa tụfuru.
Echere m na nlaazu ahụ bụ njedebe nke mgbanwe ọganihu na-eto ngwa ngwa na uto na teknụzụ. Ogologo afọ anọ dị oke nwayọ, ọrụ nrụpụta na-akpaghị aka, yana ịnweta ozi na-akpata otu n'ime nsogbu ụwa niile na akụ na ụba na azụmaahịa ụwa hụtụrụla.
Nke ahụ ọ pụtara na olileanya niile efunahụ? Mba! Mana ọ pụtara na otu akụkụ nke ụwa agbanweela na ngwa ọzọ - na-ahapụ ọtụtụ ndị ọzọ n'azụ. Ndị nọ n'ọchịchị ahụ abụchaghị ndị bara ọgaranya ma ọ bụ ndị gụrụ akwụkwọ… ha bụ ọchụnta ego, ihe nkwụnye ọkụ, onye na-eche echiche, na onye na-emebe echiche.
Nke a bụ akụkọ ihe mere eme na-ekwughachi onwe ya, mana n'ọtụtụ ọhụụ nke anyị na-ahụtụbeghị mbụ. Jidesie ike, meghachi ngwa ngwa, mee karịaNke a ga-abụ njem gba ọtọ.
Tags: akwa ahia blọgụ
Dec 6, 2008 na 6:29 PM
Akụkọ ihe mere eme emeela ọtụtụ ugboro na mbụ, ma gafee kwa ugboro. Ọ bụ usoro okike. Nzọụkwụ 2 na-aga, otu nzọ azụ. Ọgba, egbe, Ọgba, Ọgba, Ọgba. Na Obere-cycles n'ime usoro okirikiri ka ukwuu.
Anyị amalitela ugbu a, na nnukwu, laghachite azụ. Nzọụkwụ ndị na-abịanụ ga-adọrọ mmasị, ozugbo ha malitere.
Dec 6, 2008 na 11:53 PM
Nlaazu ahụ bụ egwu nke ahịa ahịa na-adakwasị ndị ọzọ. A na - akpọbu ndapụta azụ ụjọ, laa azụ na narị afọ nke 19. Ọ bụ na-enweghị uche, dị nnọọ ka ndị a ma ama “enweghị uche oké obi ụtọ” nke 1990s tech afụ.
Tha na-agba ọsọ nke nkà na ụzụ abụghị ihe kpatara ya, mana ọ nwere ike ịbụ ọgwụgwọ maka nlaazu a.
Dec 7, 2008 na 6:30 PM
Ekwetaghị m, Clark! Kedụ ka anyị ga - esi mee ka ndị isi gọọmentị anyị 'gbapụta' ngalaba ọrụ kwesịrị ekwesị nke ga-akwụ ụgwọ na ogologo oge mgbe ahụ?
Dee 8, 2008 na 3: 50 AM
Mmasị post Douglas, echere m na egwuregwu ụta na-abịa na njedebe na ngafe nke ndị gọọmentị, ugbu a anyị ghọtara na anyị ga-eme ihe. Otu n'ime ngalaba kachasị ga-agbanwe ga-abụ nke mgba ọkụ n'ịgbakwunye, kama iti mkpu, ndị ahịa gị. Mgbasa ozi na-ewute ndị kachasị na usoro mgbasa ozi ọhụụ niile; odighi onye ma ihe o g’eme banyere ya. Bumpy ride n'ezie.